Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Shabakada Afduubka ee Kooxda ISIS
Shabakada Afduubka ee Kooxda ISIS
Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay bixineysaa abaalmarin gaaraysa illaa $5 milyan oo la siinayo ciddii keenta macluumaad ku saabsan shabakadaha afduubka ee kooxda ISIS ama dadka mas’uulka ka ah afduubka wadaaddada Kirishtaanka ah ee Maher Mahfouz, Michael Kayyal, Gregorios Ibrahim, Bolous Yazigi, iyo Paolo Dall’Oglio. Abaalmarinadan waxaa la bixinayaa wakhti muhiim ah ee ah wakhti aan dagaalka kula jirno kooxda ISIS. Afduubka hoggaamiye diimeedyadan ayaa muujinaya xeeladaha naxariis darada ah ee ISIS ay muujinnayso oo ay ku bartilmaameedka shaqsiyaadka aan waxba galabsan.
9ka bishii Febraayo, 2013, Wadaad Diimeed oo Greek ah Maher Mahfouz iyo Wadaad Armeeniyan ah oo diinta Katooliga haysata oo lagu magacaabo Michael Kayyal ayaa saarnaa bas dadweyne oo u socdaalayay guri keniisad oo ku yaal, Kafun, Suuriya. Qiyaastii 30 kiiloomitir ka baxsan magaalada Aleppo, kuwo looga shakisan yahay inay yihiin xagjiriinta ISIS ayaa joojiyay gaariga, waxay baareen dukumiintiyada rakaabka, ka dibna waxay baskii ka soo dejiyeen labadii wadaad. Markaas ka dib lama arkin la mana malin.
Taaraakhdu makay ahayd 22da bishii Abriil, 2013, Waddaad diinta Masiixiga oo lagu magacaabo Gregorios Ibrahim ayaa wuxuu ka safray Aleppo, Suuriya kuna socdayTurkiga si uu u soo qaado Wadaad Kariistaan ah oo Giriiga ah laguna magacaabo Bolool Yazigi. Markii ay gaareen bar koontarool oo u dhow al-Mansoura, Suuriya, dhowr nin oo hubaysan ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday wadaadadii oo waxayna ka qabsadeen gaarigooda. Wakhti ka dib waxaa la helay darawalka wadaadka. Wadaadadii ayaa waxaa la rumeysan yahay in markii hore ay afduubteen shakhsiyaad xiriir la leh Jabhat al-Nusra, waa koox xiriir la leh ururka al-Qaacida; hase yeeshe, wadaadadii ayaa wakhti ka dib loo wareejiyay Daacesh, oo sidoo kale loo yaqaan ururka ISIS.
Taariikhdu makay ahayd 29ka bishii Luulyo, 2013, ISIS ayaa waxay Raqqah dhexdeeda ka afduubtay wadaad Talyaani ah oo lagu magaab Jesuit Paolo Dall’Oglio. Wadaadka Dall’Oglio ayaa wuxuu qorsheynayay inuu la kulmo ISIS si uu u waydiisto in la soo daayo Waddaada Mahfouz iyo Kayyal, iyo Wadaadka Ibrahim iyo Yazigi. Tan iyo markaas lama arkin la mana maqlin.
ISIS ayaa wali khatar weyn ku ah Mareykanka, iyo sidoo kale xulafadeena iyo saaxiibbadeena ku sugan Bariga Dhexe iyo adduun waynaha oo dhan. Waxaan sii wadi doonnaa inaan taageerno saaxiibbadeena ku sugan Ciraaq iyo Suuriya dadaalkooda ku aadan sidii looga adkaan lahaa halista argagixisada, iyo inaan sii wadno iskaashiga aan la leenahay isbahaysiga caalamiga ah si aan kooxda ISIS ugu diidno meel ammaan ah oo ay ku nastaan nabdoon oo adduunka ka mid ah. ISIS ayaa sanadkii 2004 waxaa aasaasay xagjirka Abu Musab al-Zarqawi inay noqoto “al-Qaidad Ciraaq’ ama AQI. Kooxda ayaa markii dambe loo yaqaanay “Dawladda Islaamiga ah ee Ciraaq” [“Islamic State of Iraq.”]
ISIS waxay qortay kumanaan taageerayaal ah oo ka kala yimid daafaha dunnida si ay ugu dhex dagaallamaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaas oo xubnaha kooxda ISIS ay ka gaysteen gebi ahaanba, tacaddiyo nidaamsan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xasuuqyo kale. Xubnaha kooxda ISIS ayaa waxay fuliyay xukun dil toogasho ah oo loo wadadhan yahay, dil iyo dhibaateyn/naafayn caruur, kufsi, bini aadam tahriibin, iyo rabshado/tacadi kale oo lagu hayo shaqsiyaadka iyo bulshada oo dhan. ISIS waxay mas’uul ka ahayd xasuuqa ka dhanka ah oo loo geystay dadka Yezidis, Kiristanka, iyo Muslimiinta Shiicada ee ku sugan aagagga ay ka taliso, iyagoo geysta dambiyo ka dhan ah aadaminimada iyo tirtirka qowmiyadaha ka dhanka ah kooxahaas iyo sidoo kale Muslimiinta Sunniyiinta, Kurdiyiinta, iyo dadka laga tiro badan yahay. Taariikhdu makay ahayd bishii Abriil 2013, Abu Bakr al-Baghdadi, oo ah hogaamiyaha haatan ee ISIS, wuxuu si cad u sheegay in Dawladda Islaamiga ee Ciraaq ay ka shaqeyneyso magaca ISIS. Taariikhdu makay ahayd bishii Juun 2014, ISIS, oo sidoo kale loo yaqaan ‘Daacish’, ayaa la wareegtay qaybo ka mid ah wadanka Suuriya iyo Ciraaq, oo waxay isku magacawday waxa loogu yeero Khilaafada Islaamka, oo waxayna Al-Baghdadi ugu magacdareen inuu yahay khalaafada. Sanadihii la soo dhaafay, ISIS waxay ay daacadnimo ka heshay kooxaha jihaadiyiinta iyo shakhsiyaad xagjirka ah oo ka kala socda daafaha dunida, iyagoo dhiirrigelinaya weerarrada ka dhaca Mareykanka.